Imeshi yokuhlobisa yensimbi yokwahlukanisa ihlanganisa: ikhethini lemeshi yensimbi, ikhethini lensimbi elima mpo, ikhethini lensimbi, ikhethini lethusi, ikhethini eliqondile, ikhethini lemeshi yensimbi evunguzayo, ikhethini lemeshi yensimbi yokuhlobisa, ikhethini lensimbi yodonga lwamakhethini, ikhethini lemeshi yensimbi yosilingi.
Isingeniso se-partition metal mesh yokuhlobisa
Ngokuthuthuka kwezobuchwepheshe emkhakheni wokuhlobisa izakhiwo kanye nokuvela okuqhubekayo kwezinto zokwakha, inethiwekhi yokuhlobisa insimbi yokwakha, njengommeleli wezinto ezintsha zokuvikela imvelo embonini, idonsele ukunakwa okukhulu embonini. Imikhiqizo iyavuthwa kancane kancane, idume futhi isetshenziswe kumaphrojekthi wokuhlobisa izakhiwo eziyingqopha-mlando, futhi kancane kancane iya emakethe yamazwe ngamazwe.
Imininingwane ye-partition metal mesh yokuhlobisa
insimbi engagqwali, ithusi, i-aluminium
I-wire mesh elukiwe
ukwahlukanisa metal anezikhala zokuhlobisa
Isiliva, igolide, nanoma yimuphi omunye umbala owuthandayo
Izici ze-partition metal mesh yokuhlobisa
Amanetha ensimbi okuhlobisa angacutshungulwa abe imibala eyingqayizivele. Lezi zintambo zokuhlobisa zensimbi ezinemibala zenziwe ngezinto ezihlukahlukene zokuthungwa kanye nezindlela ezahlukene zokucubungula. Ngaphezu kokugcina izinzuzo zokusebenza zensimbi futhi kulula ukuzinakekela, ukubukeka kwazo okushelelayo kulula ukukuhlanza, futhi kuhlangabezana kangcono nezimfuneko zomklami zesitayela nobuntu.
Le mesh yocingo ihlanganisa ubuhle nokusebenza ukuze inikeze ukukhanga okubonakalayo okuphoqelelayo, ukunethezeka okwandisiwe, ukuphepha nokusebenza kahle kwamandla. I-wire mesh yokwakha ingenye yezindlela eziphumelela kakhulu zokufiphaza kwelanga futhi ingalungiselelwa ukumelana nomoya onamandla. Ingapendwa kunoma yimuphi umbala noma usayizi we-laser cut. Kungakhathaliseki ukuthi ukhetha i-aluminium mesh, insimbi engagqwali noma insimbi, i-mesh yethu yocingo yezakhiwo ihlobisa ngendlela eyimfashini izindonga nosilingi kuyilapho ibonakalisa ukukhanya futhi yengeza ukuthungwa kuso sonke isikhala esingaphakathi.
Okwedlule: Insimbi Engagqwali Yensimbi Yokuhlobisa Ikhethini Wall Wire Mesh
Olandelayo: Insimbi engagqwali izinga lokushisa eliphezulu le-fiber mesh ye-sintered, i-sintered fiber izwakala
I-Architectural Mesh yokuhlobisa insimbi...
Ukucaciswa kokuhlobisa kwe-spiral mesh NO. I-Mesh Reference Material Ubukhulu obuyi-Spiral x ububanzi Induku ewela ububanzi Iphimbo elivundlile I-cross rod pitch Isisindo 1 SK-2001 Insimbi engagqwali 201,304,316, 316L njalonjalo; Insimbi enekhabhoni ephansi 1.0mm x 1.6mm 1.5mm 8mm 12mm 6.0 KG/m² 2 SK-2002 1.0mm x 1.6mm 1.2mm 13mm 8.0mm 3.0 KG/m² 3 SK-2003 1.0mm x 2mm 1mm 4.0mm m² 4 SK-2004 1.4mm x 2.3mm 2.0mm 11mm 18mm 7.5 KG/m² 5 SK-2005 1.4mm x 2.3mm 2.0mm 12mm 23mm 6.5 KG/m² 6 SK-2006 ...